“Manchester United waa koox weyn, balse kubadda ay ciyaareyso waa mid kugu qasbeysa inaad seexato” – Memphis Depay – Gool FM
“Manchester United waa koox weyn, balse kubadda ay ciyaareyso waa mid kugu qasbeysa inaad seexato” – Memphis Depay
(Yurub) 09 Juunyo 2019. Xiddiga xulka qaranka Netherlands iyo kooxda Olympique Lyon ee Memphis Depay ayaa difaacay naftiisa kaddib markii uu ka hadlay wakhtigii xumaa uu ku soo qaatay Manchester United, taasoo ugu dambeyntii sababtay inuu ka tago garoonka Old Trafford.
Memphis Depay ayaan ka mid noqonin ciyaartoyda ugu fiican kooxda Manchester United, laakiin kahor inta uusan imaanin wuxuu ahaa xiddigihii ugu fiicnaa PSV Eindhoven iyo guud ahaan horyaalka Holand, balse wuxuu ku guuldareystay inuu ku sameeyo qaab ciyaareedkiisii wanaagsanaa naadiga Red Devils.
Hadaba Memphis Depay oo ka hadlayay wakhtigiisii xumaa ee kooxda Manchester United ayaa wuxuu yiri:
“Waan ku biiray waxaan ku fekeray inaan ku kordhin doono tayada qaar ee ka maqan kooxda”.
“Manchester United waa koox weyn oo magac leh, laakiin kubada ay soo bandhigaan dhawaanahan waa mid aad u jilicsan, islamarkaana aad ku seexaneyso”.
Memphis Depay ayaa laga yaabaa inuu xagaagan ka tago Lyon, waxaana qandaraaskiisa qeyb ka ah in kooxda Manchester United dib ugu soo ceshan karto cel celis ahaan inta u dhexeysa 40-50 milyan euro, laakiin waxay u muuqataa inuu qaadi doono talaabo midaas ka duwan.
Waa Kaaf iyo kala dheeri – Mushaarka uu Man United ka qaadan doono Daniel James & Midka uu ka helayey kooxda Swansea!
Sergio Ramos oo ka aragti dhiibtay heshiiska uu Eden Hazard ku yimid Real Madrid